प्रियंकाले बच्चा कहिले जन्माउछिन ?
तस्बिर: प्रियंकाको फेसबुकबाट।
काठमाडौं । नायिका प्रियंका कार्की आमा बन्ने भएकी छन । प्रियंकाले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत गर्भवती भएको खुलाएकी हुन । पोस्टमा आफ्नो र श्रीमान आयुष्मानको फोटो सेयर गर्दै प्रियंकाले लेखेकी छन्, अब तपाईंहरू मलाई सोध्न छाड्नु भए हुन्छ हो, हामी गर्भवती छौं।
केही समय अघिदेखि सामाजिक सञ्जालमा उनी गर्भवती छन् कि भन्ने विषयमा चर्चा चलेको थियो। उनका शुभचिन्तक तथा फ्यानहरूले उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नदेखिएको र पोस्ट गरिएका फोटोमा मोटाएको देखिएको जस्ता कुरालाई आधार बनाएर प्रियंका गर्भवती भएको हो कि भन्ने अड्कल काटेका थिए। अब प्रियंकाले खुलस्त रूपमा आफू गर्भवती भएको स्वीकारेकी छन्।
प्रकाशित मिति: शनिवार, चैत्र २१, २०७७, ११:४८:४७
बलिउडमा ऐश्वर्या राम्री भन्ने कि सुपर सेक्सी ?
बलिउडमा अहिलेसम्मकै सुन्दर नायिकाका रुपमा ऐश्वर्या रायलाई लिइन्छ । उनी यति राम्री छन् कि, हर कोहीले मन पराउँछन् । ऐश्वर्यालाई विस्थापित गर्ने नायिका बलिउमा अहिले पनि देखिदैनन् । पुरा पढ्नुहोस्
हट कादर्शिन बनिन् विश्वकै चर्चित अर्बपति
अमेरिकी चर्चित सेलिब्रेटी हुन्, किम कादर्शिन । उनको क्षमता अनेक छ । टेलिभिजनमा उनी रियालिटी शो चलाउँछिन् । त्यसपछि उनी ब्यापार गर्छिन् । केही गीतमा मोडलिङ पनि । यति मात्रै होइन, उनी बेला बेला पोर्न भिडियो समेत खेल्छिन् । जहाँबाट उनले मोटो रकम पारिश्रमिक लिन्छिन् । पुरा पढ्नुहोस्